आज काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक, के हुँदैछ छलफल ? – Everest Dainik – News from Nepal
आज काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक, के हुँदैछ छलफल ?
काठमाडौँ, भदौ ९ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको आजका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार बस्ने भएको छ । पार्टीको महासमिति बैठकको तयारी र अन्य समिति गठन सम्बन्धमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत शीर्षनेताहरुबीच शुक्रबार दिनभरको छलफल र सहमतिपछि बैठक शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको हो ।
पार्टीका विभिन्न समितिको गठन र महासमिति बैठकको तयारीका सम्बन्धमा शीर्षनेताहरुबीच सल्लाह गरी टुङ्गो लगाएर मात्र बैठक बस्ने सहमति भएपछि बैठक शनिबारका लागि तय भएकाे केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।
विशेषगरी महासमिति बैठकको स्थान र मिति, कार्यसम्पादन तथा अनुशासन समिति गठनका सम्बन्धमा नेताहरुबीच छलफल भएको उनले जानकारी दिए । ‘धेरै विषयमा सहमति भए पनि केही विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ’ नेता बडूले भने ।
सोही निर्णयअनुसार बिहीबार काँग्रेसले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिमा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले पनि सहभागिता खोजेपछि शीर्षनेताहरुले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि गठन गरिएको कार्यसम्पादन समितिका बारेमा विवाद देखिएपछि उक्त समिति विघटन गरिएको थियो । काङ्ग्रेस विधानको दफा २९ बमोजिम कार्यसम्पादन समितिमा सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताका साथै केन्द्रीय समितिबाट बढीमा २२ जना रहने व्यवस्था छ । -रासस
ट्याग्स: Congress Meeting, Nepali Congress meeting, केन्द्रीय समिति बैठक